ၾကြက္နို ႔ႏွင့္ ငါးမ်က္စိ လြယ္လြယ္ေလး သတ္ၾကမယ္ - Thadin
[ May 19, 2019 ] “ဘ၀မွာ ခံရေပါင္း မ်ားလာတဲ႔သူေတြက မာနပိုၿပီးႀကီး သြားတတ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ့ရွိ” KNOWLEDGE
HomeHEALTHYၾကြက္နို ႔ႏွင့္ ငါးမ်က္စိ လြယ္လြယ္ေလး သတ္ၾကမယ္
August 24, 2018 Admin Kwee HEALTHY 13
(၁၀)မိနစ္ၾကာလွ်င္ ငါးမ်က္စိ ၊ ၾကြက္နို႔ သည္ အသား ေပၚသို႔မသိမသာၾကြ ၍ တက္လာပါ သည္။
ထိုအခါ လက္ျဖင့္ကိုင္ကာဆဲြနုတ္လိုက္ပါက အျမစ္အံုပါ ကြ်တ္၍ ပါလာမည္ကိုကိုယ္တိုင္ကိုယ္ က်ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တင္ျပပါနည္းမွာ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳၾကိဳက္ဖူးေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ပါသည္။
Credit : ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိျမိဳငိ္)
ငါးမျက်စိရောဂါကို အင်္ဂလိပ်လိုCron ခေါ်ပါသည်။
ငါးမျက်စိရောဂါ(molluscum Contagiosum) သည်အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အဖုလေးအလုံးလေး များဖြစ် ပါသည်။ညှစ်လိုက်ပါက အဖုလုံးလေးများမှ အဆံလေးများထွက်တတ်ပါသည်။
ကူးစက် မှုလွယ်ကူးပြီး။ ထိမိ၊ဖိမိက နာလှပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အနှံအပြားတွင်လည်း ပေါက်တတ် ပါသည်။
သို့သော်ငါးမျက်စိသည်ခြေထောက်တွင် ပေါက်သည်ကများပါသည်။အချို့ကအသားမာဟု လည်း ခေါ်သည်။
ကြွက်နို့(Wart)ခေါ်သည်။ကြွက်နို့ဟာHPI လို့ခေါ်ကြသည့် Human Papilloma Virusဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ HPI ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား(၈၀)ကျော်ကြောင့် ကြွက်နို့ဟာ လူခန္ဓာအနှံ့ပေါက်တယ်လို့ဆိုပါသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးနည်း တစ်ခုဖြင့် ကြွက်နို့၊ ငါးမျက်စိရောဂါကို အသေအချာပျောက် ကင်းပါသည်
ကွမ်းစားထုံး (ဖေါက်ထုံး) ကွမ်းသီးတစ်လုံးစာ
ဂျင်း (၁)ကျပ်သား တစ်တက်
အိမ်တွင်းလွယ်လွယ်ကူကူရရှိစေသော အမယ်(၃) မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ထိုသုံးမျိုးကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး ငါးမျက်စိ (သို့ိ)၊ကြွက်နို့ပေါ်သို့ အုံ၍ ပတ်တီးစည်း ထားရ ပါသည်။
(၁၀)မိနစ်ကြာလျှင် ငါးမျက်စိ၊ကြွက်နို့သည် အသားပေါ်သို့မသိမသာကြွ ၍ တက်လာပါ သည်။
ထိုအခါ လက်ဖြင့်ကိုင်ကာဆွဲနုတ်လိုက်ပါက အမြစ်အုံပါ ကျွတ်၍ ပါလာမည်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ် ကျမြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပြပါနည်းမှာ ကိုယ်တိုင်ကြုံကြိုက်ဖူးသော ဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။
Credit : ရဲမျိုးသူ(ဗောဓိမြိုငိ)
ေဒၚလာေသာင္းခ်ီတန္တဲ့ ကမာၻ႔ေစ်းအၾကီးဆံုးဖုန္း Brand တစ္ခုကို ကိုင္ေနတဲ့ မိုးေဟကို
If you require permanent writers, then you need to go to any job
sites and becomingaconsultant. Some of you for you to get agitated, and start submitting to
the search engines again, and again. http://sweetbellpeppers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun&popup=1&count=1&ie=1%5Dbuy
If you require permanent writers, then you need to go
to any job sites and becomingaconsultant. Some of you for you
to get agitated, and start submitting to the search engines again, and again. http://sweetbellpeppers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=jom.fun&popup=1&count=1&ie=1%5Dbuy
Exceptional blog and superb design. I have been surfing on-line more than3hours today, but I by no means found any fascinating
just right content as you did, the internet shall be much more useful
than ever before. Hi! I’ve been following your website for some
to hit the nail upon the highest as well
as defined out the whole thing without having side-effects , other folks can take a
sculptures with shapes depictingaunique combination of different components from the artist’s religious, physical and cultural background.
in April 22, 1560, he was quoted saying:” Your Majesty, you’re invincible and contain the world in awe. As modern humanity exposes their tanned skin during vacations that they like to show off their pictures in social network websites.
I honestly appreciate this posting. Image checking over because of this!
Thank goodness I ran across it in Msn. You’ve built the
time! Thank you all over again
This Month : 36839
This Year : 232237
Total Users : 591261
Total views : 2712246